Casharrada Baradho ah ee macaan: Kiiska loogu talagalay xalalka guriga lagu xannaaneeyo
Robert Mwanga ayaa xirfad u baddashay baradhada macaan-macaan ee baraf-macmacaanka ah ee qalab looga hortagi karo indho-la'aan iyo badbaadinta nolosha malaayiin carruur ah oo ku baahsan Africa.
Sanadkii 2016-kii, saynisyahan u dhashay dalka Uganda iyo seddex ka mid ah asxaabtiisa ayaa ku guuleystey Abaalmarinta Cuntada Adduunka, oo ah aqoonsiga ugu sareeya cilmi baarista beeraha ee adduunka, soo saarista noocyo baradho macaan oo heer sare leh oo ah fitamiin A. Waxay ahayd guul la yaab leh iyo daqiiqad sharaf leh shaqaalaha. Hay'ada McKnight, oo fursad ka heshay aragtida Dr. Mwanga aragtideeda layaabka leh in ka badan labaatan sano ka hor si loola dagaallamo nafaqo-darrada iyada oo ah xidid keyd ah.
"Markaad ka hadleyso Ebola, qof walboo aqoonsadaa khatarta," ayuu yiri Dr. Mwanga, oo ah cilmi-baaris la leh Xarunta Baradhada Caalamiga ah. "Laakiin markaad ka hadlaysid yaraanta fitamiin A, ma ahan mid u hanjabaya. Hase yeeshee, 51 carruur ah oo da'doodu ka yar tahay lix sano ayaa wali ku dhimata maalin kasta Uganda sababtoo ah. "
McKnight ayaa hore u aqoonsaday in cilmi-baadhayaashu ay ka jiraan dalalka soo koraya si ay u helaan awoodda ay u xalliyaan baahidooda cadaadiska ah.
In ka badan 40% carruurta da'da dugsiga dhigata iyo 10% haweenka uurka leh ee ka hooseeya Sahara subagga Afrika ma helayaan fitamiin A ku filan, sida ay qabto Hay'adda Caafimaadka Adduunka. Dhibaato halis ah waxay keeni kartaa indhoole iyo kordhinta suurtagalnimada ilmo dhimanaysa dhibaatooyinka caadiga ah sida shubanka iyo jadeecada.
Waxay noqon doontaa dadaal Herculean ah oo loogu talogalay inay bixiso vitamin A capsules qoys kasta oo ku baahsan Africa, sidaa daraadeed Dr. Mwanga wuxuu weydiiyay, "Maxaa dhacaya haddii aad ku dari karto nafaqada cunnada caadiga ah?"
Tani waa waxa Dr. Mwanga soo jeediyay codsigiisii koowaad ee deeqda ee 1994-kii. Waqtiga ayaa ahaa mid aad u fiican. Maktabadda McKnight waxay hadda bilowday Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada sanad ka hor. Halkii laga rabo mashaariicda ay hoggaaminayaan saynisyahannada Europe iyo Maraykanka, McKnight ayaa hore u aqoonsaday in cilmi-baarayaasha dalalka soo koraya ay leeyihiin awoodda si ay u xalliyaan baahidooda cadaadiska ah. Xaqiiqdii, saynisyahannada maxaliga ah waxay leeyihiin gees marka ay si cad u fahamsan yihiin waxyaalihii loo baahnaa ee bulshada deegaanka iyo dabeecadaha dhaqanka ee samayn kara ama jebin kara waxqabadka nafaqada.
"Waxaan codsanay fikrado waawayn iyo soo jeedin ballaadhan, laakiin xitaa marka la eego, hindisaha Robert wuxuu ahaa mid aad uwanaagsan," wuxuu xusuusinayaa Bob Goodman, xubin ka mid ah guddiga kormeerka barnaamijka dalagga iyo hadda dalladda fulinta ee Dugsiyada Dhaqan-celinta Deegaanka iyo Biyoolojiga ee Rutgers Jaamacadda, New Brunswick, New Jersey.
Wadashaqeyn sida Wareegga Badbaadinta ee Horumarinta Caalamiga ah
Sida dad badan oo reer Uganda ah, Dr. Mwanga iyo 10 ka mid ah walaalihiis ayaa koray cunista xididdada dhirta. Hooyadiis ayaa ku soo beegantay dalag lacageed sida qaxwaha iyo cottonka oo ku yaal beerta 20ka beerood ee beerta Busota, oo ah magaalada bari ee magaalada caasimadda ah ee Kampala. Inkasta oo ay nafaqo yaryar tahay, baradhada cad oo jilicsan iyo baradhada jaalaha ah si ballaadhan loogu beeray Afrika waxay leeyihiin wax aad u yar ama aan lahayn beta-carotene oo ka duwan noocyada orange-fleshed noocyada kale ee adduunka. Dr. Mwanga waxaa loogu talagalay in uu sameeyo kala duwanaanta orange-hilib badan oo tayo leh oo ku haboon isticmaalka ballaaran.
McKnight wuxuu taageersanaa Dr. Mwanga isaga oo raacay jaamacadda North Carolina State University ee Raleigh, halkaas oo uu si wacan ugala shaqeeyay G. Craig Yencho, oo ah dhakhtar ku takhasusay macmudka jimicsiga ee Sweetpotato iyo Baradhada Neefta iyo Barnaamijka Genetics.
"Ma ahan sidii aan Robert u sheegi lahaa sida loo sameeyo" ayuu yiri Yencho. "Waxay weydiisay 'Sidee ayaan ku caawin karaa?'" Markii uu ahaa mutadawac hore oo ah nabadgelyo nabadeed, Yencho wuxuu si joogta ah u arkay in dadka ajnabigaa ay yimaadaan waddan si ay u xalliyaan dhibaatooyinkooda. Waxa uu u muuqdaa McKnight in uu si toos ah ula shaqeeyo habka ugu wanaagsan ee horumarinta caalamiga ah.
Maxaa dhacaya marka cilmi saynis weyn soo celiso Guriga
Kadib markii uu qaatay shahaadadiisa, Dr. Mwanga waxa uu khibrad u soo celiyay Ugandha, halkaas oo McKnight uu sii waday shaqadiisa isaga oo $ 2.3 milyan laga bilaabo 1995 ilaa 2014.
Sanadihii la soo dhaafay, kooxdiisi waxay soo saartey in ka badan darsin cusub oo dufan ah oo baraf ah oo sareeya oo bata-carotene ah oo sareeya, kaas oo jidhku u soo jeesto vitamin A. Noocyo cusub ayaa sidoo kale iska caabiyay dillaac iyo abaar, oo lahaa hilib qalalan, waxay u dhigantaa in ay ku guuleystaan kuwa ku loolamaya qoyaanka iyo qoyanaanta aan caadiga ahayn ee noocyada badankood. Cunto-saarayaasha ka yimid waddamada deriska ah ayaa ka soo baxay mashruuca cilmi-baarista Dr. Mwanga ee Uganda si ay wax uga bartaan munaasabadaha super-spuds. Maaliyaddo kale oo dheeraad ah ayaa ku jiray guddi, oo ay ku jiraan Foundation & Melinda Gates Foundation. Sida laga soo xigtay Hay'adda World Food Prize Foundation, maanta waxaa ku dhowaad laba milyan oo qoys oo ku yaala 10 gobol oo Afrikaan ah ama waxay iibsadaan baradhada macaan ee nafaqo leh.
"Waxaan sameynay horumar weyn. Tirada dadka ku cunaya waxay si degdeg ah u kordhayaan. " -DR. ROBERT MWANGA, Xarunta Jaamacadda ee caalamiga ah
Cilmi-baadhayaashu waxay abaabuleen kooxo beeraleyda ah si ay u iibiyaan geedka canabka ah ee barafka oo aan lahayn cayayaanka beeraha yaryar. Ololaha waxbarashada dadweynaha waxay kor u qaadaan barandhada barafka leh shaatigaha, boorarka, iyo baabuurta yaryar ee dhalaalaya. Gacan-siinta cuntada waxay horumarineysaa wax kasta oo ka soo baxa baradhada baradhada baradhada iyo dufanka, si ay u buuxiyaan barafka barafka leh.
"Waxaan sameynay horumar weyn," ayaa uu yiri Dr. Mwanga, oo ka hadlaya "xakamaynta kartida" ee baradho-macaan oo casri ah ee qaaradda. Tani waxay ka dhigan tahay in carruur badani ay helayaan fitamiin A inay u baahan yihiin inay ilaaliyaan aragtiooda iyo jirkooda dhalinyarada oo xooggan, oo laga yaabo in ay suurtagal ka dhigto suurtagalinta aqoonyahanno kale oo jimicsi ah inay maalmaha soo socda helaan.